Ichi chi 3D vanhu vanopikisa, inova yepamusoro kwazvo 3D vanhu vanoverenga Machine pamusika, uye zvakare inopa Ekugara kudzora basa, Akawanda edu Vanhu vachiverenga masystemzviri patent zvigadzirwa. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kubata yedu kutengesa staff kukutumira iwe rwakadzama ruzivo nezve yedu Vanhu kuverenga system.
Iyo HPC009 vanhu kuverenga system inoshandisa inozvigadzira-mbiri-kamera kudzika algorithm modhi kuti igoona zvine simba muchinjikwa-chikamu, kukwirira uye kufamba kwekufamba kwechinangwa, nekudaro kuwana yakakwira-chaiyo chaiyo-nguva-yenguva yekufamba kwe data, uye yakavakirwa-muHuawei yakatsaurirwa vhidhiyo Hardware yekumhanyisa injini yakakwira-yekuita yekutaurirana midhiya processor, Kuziva kwakaringana kwezvakawanda zvinangwa, otomatiki kusefa kwekukanganisa chero nguva.
Iyo HPC009 Vanhu kuverenga systemhaina kukanganiswa nechiedza chemberi, mwenje nemumvuri, uye inogona kuenzaniswa nenzira inosangana nezviitiko zvekushandisa. Inowanzo shandiswa mumamiyuziyamu, mapaki, nzvimbo dzekutengesa, zvitoro zvemaketani uye zvimwe zviitiko kuverenga otomatiki kufamba kwevanhu. Iyo parameter yemameter yemameter inogona kugadziriswa kuburikidza nemashandisi evatengi. Nzvimbo yekuverenga, kuverenga kutungamira uye rumwe ruzivo rwunogona kuratidzwa online, uye mhedzisiro yekuverenga iri pachena pakatarisa.
Vanhu kuverenga Machine inobatanidza zvakananga kune server server kuburikidza netambo tambo kana WIFI, inokanda iyo data munguva chaiyo, uye wozobvunza iyo data yevatakuri yekuyerera inotaridzwa ne 3D vanhu vanopikisa munguva chaiyo kuburikidza nepuratifomu yegore.
Kubudikidza nechinangwa chekuona kukwirira, ngoro dzekutengesa supermarket uye zvimwe zvinangwa zvinogona kusefetwa otomatiki. MRBvanhu vachiverenga mhinduro inogona kupa imwe RJ45, imwe RS485 uye imwe vhidhiyo kuburitsa panguva imwe chete, uye inogona kupa yemahara mushumo system kana yechipiri budiriro interface, uye kutsigira yakazvimirira server kuendeswa.
HPC009 Vanhu kuverenga system ine yakazara inotsigira yakazara mhinduro.
1. Shandisa data bhokisi kukurumidza kuendesa yakazvimirira mushumo manhamba system uye TV bhodhi.
2. Kuburikidza netambo netambo, iyo yakatarwa yepakati modhi yekufambisa chikuva, uye gore chikuva kuti utarise mushumo data.
3. Unganidza monitor kuti utarise zvakananga kuwongorora manhamba uye mifananidzo ine simba yevhidhiyo.
4. Ipa yakavanzika server interface chirongwa kana chechipiri zvigadzirwa zvekuvandudza zvechipiri kukura.
5. Kudzora kwekugara kunogona kuzadzikiswa kuburikidza neiyo kumashure software yeHPC009 vanhu vachiverenga mhinduro.
Rondedzero yeVanhu kuverenga system
HPC009 3D Vanhu Kuverenga system vhidhiyo
Tine mhando dzakawanda dze IR Vanhu kuverenga system, 2D, 3D, AI Vanhu kuverenga system, panogara paine imwe inokukodzera, ndapota taura nesu, isu tinokurudzira iyo yakakodzera kwazvo Vanhu kuverenga system zvako mukati memaawa makumi maviri nemana.
Pashure: MRB Vehicle kamera ye mobile DVR
Zvadaro: MRB AI boka revanhu rinopikisa HPC198